सत्ता र शक्तिको कब्जामा न्याय- विचार - कान्तिपुर समाचार
वैशाख ९, २०७९ सुमिना
‘उसलाई जेल सजाय हुँदै हुँदैन । हेर्दै जाऔं, केही दिनमै घटनाले स्वरूप परिवर्तन गर्नेछ ।’ नाबालिग करणी अभियोगमा भर्खरै थुनामा राखिएका नेपाली चलचित्रका एक कलाकारको पक्षपोषण गर्दै एउटी आम महिलाले मसँग लामो ‘डिस्कस’ र ठोकुवा गर्दै दिएको अभिव्यक्ति हो यो । उनको ठोकुवा यथार्थमा परिणत हुन सक्ने सम्भावना निम्तिरहेको छ । केही दिनअघिसम्म पीडितको पक्षबाट बलियो देखिएको मुद्दाले एकाएक स्वरूप परिवर्तन गरेको छ र घटनाक्रममा कायापलट भएको छ । सर्भाइभरले बयान फेरेकी छन् र अभियुक्त बेकसुर साबित हुने पर्याप्त सम्भावनाहरू देखिएका छन् । यससँगै अभियुक्तको पक्षमा नाराजुलुससम्म गर्न पछि नपरेको हिंस्रक जमातको संरक्षकको भूमिका खेलिरहेको लस्करमा नयाँ तरङ्ग र उत्साह पैदा भइरहेको छ भने पीडितमाथि तुच्छ खाले टीकाटिप्पणी एवम्
व्यङ्ग्यको वर्षा भइरहेको छ ।
नेपालको न्यायालय महिला हिंसाको मुद्दामा प्रायः अनुदार रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ । वर्षौंदेखि सत्ता, शक्ति र पुरुष–वर्चस्वका अगाडि नतमस्तक भएर न्यायालयले पितृसत्ताकै पैरवी गरिरहेका पर्याप्त उदाहरण छन् । उल्टै पीडितले अनेकौं आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा मनोवैज्ञानिक सकसहरू झेलिरहेका र सिङ्गो जीवन नै कठिन बनाइएका दृष्टान्त पनि छ्यालब्याल छन् । स्थानीय तहदेखि सर्वोच्च निकायसम्म महिला हिंसाका मुद्दामा पीडितमाथि सरोकारविहीन जस्तै बनेका कारण यसप्रतिको जनविश्वास दुई खेमामा विभाजित छ । पहिलो, न्यायप्रति पीडितहरूको उच्च उदासीनता र न्यायालयप्रतिको बढ्दो अविश्वास । दोस्रो, अपराधीहरूले शक्ति र सामर्थ्यको बलमा आफू रिहा हुन सक्ने वा अदालतलाई नै आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना । यस्तो स्थितिले अपराध न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेल्नुको साटो व्यक्तिविशेषलाई उल्टै प्रेरित गर्न भूमिका खेलिरहने निश्चित छ । अपराध गर्न खोजिरहेको व्यक्ति आर्थिक–सामाजिक रूपमा पहुँचवाला छ भने ऊ निडर भएर आपराधिक गतिविधिमै हिँडिरहने अवस्था देशको न्याय प्रणाली स्वयम्ले निम्त्याइरहेको छ ।
दृष्टान्त र त्यसले निम्त्याएको अविश्वास
निर्मला पन्त हत्याकाण्ड होस् या भागरथी भट्ट लगायतको मुद्दा, मृतकलाई नै दोषारोपण गरेर श्रीमती हत्याका जिउँदा अभियुक्तलाई ससम्मान रिहा गर्ने माहोल तयार पार्ने अदालत होस् या सत्ता र शक्तिको पहुँचमा भएका राजनीतिक नेताले बलात्कार गरेको आरोप लगाउने महिलालाई ठाउँको ठाउँ बयान फेर्न विवश पारेर पीडितलाई नै सामाजिक रूपमा पागल करार गर्ने शक्तिको खेल, नन्कुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीलाई न्यायबाट बेखबर बनाउने राजनीतिक पहुँच होस् या पछिल्लो समय अछाममा भएको किशोरी बलात्कारको मुद्दा, अदालती फैसलाहरूले न्यायप्रतिको जनविश्वासलाई धराशायी बनाउँदै लगेका छन् । आम उत्पीडित सर्वसाधारणका निम्ति यसले झनै डरलाग्दो नजिर बनाइरहेको छ । ‘मन मिल्दा चमत्कार, नमिल्दा बलात्कार’ जस्ता थुप्रै अपराधमुखी भाष्यहरू सिर्जेर यौन हिंसाजस्तो अत्यन्तै आपराधिक मुद्दामा ट्रोल बनाउने, अनेक व्यङ्ग्य गरेर पीडितलाई निसाना बनाई सबैतिर ‘तीर’ चलाउने र समग्र हिंसाको पक्षपोषक बनी हिंसाविरुद्ध भर्खरभर्खर उठ्न खोजिरहेको आवाजलाई निषेध गर्न जोडतोडका साथ भूमिका निर्वाह गर्ने पितृसत्ताको कुटिल चाललाई यसले झनै बल दिइरहेको छ । पीडितको आवाजलाई सामान्यीकरण गर्ने सामाजिक मनोविज्ञानलाई पनि यसले झनै सहयोग पुर्‍याएको छ । ठूलो आशा र भरोसा बोकेर न्यायालयको ढोका ढकढकाइरहेका पीडितहरूलाई नै दण्डित गरिनु कत्तिको खतराको सङ्केत हो, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हाम्रा अगाडि मडारिएको अन्यायको आँधीबेहरीले न्यायको गला दिनानुदिन कसरी रेटिरहेको छ भन्ने महसुस पनि सजिलै गर्न सक्छौं ।
आखिर कुन भरोसाले पीडितले हिंसाविरुद्ध प्रतिकार गर्नु ? कुन आशले अदालतको बाटो धाउनु ? सदियौंदेखि घरेलु या यौन हिंसाजस्तो जघन्य अपराधमा सामाजिक लाञ्छना र तिरस्कारको भयका कारण मुख थुन्न बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण गर्ने परिपाटीले आज पनि उसै गरी निरन्तरता पाइरहेको छ । निरन्तरको दबाब, विरोध र आन्दोलनका बावजुद पितृसत्ता किन अझै धरमराइरहेको छैन ? न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने अदालतहरूमा समेत पितृसत्ताको छाया झनै गाढा किन हुँदै छ ?
नाबालिगमै बलात्कृत भएँ भनी काखमा डेढ वर्षको बच्चा लिएर अनेक ठाउँ रुँदै र गुहार्दै हिँडेकी एक अविवाहित आमाको पीडा कति कहालीलाग्दो छ, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका उनका अन्तर्वार्ताहरूले स्पष्ट पार्छन् । समाजको खिसीट्युरी, अवहेलना र तिरस्कार झेल्दै भए पनि काखमा हुर्किरहेको बच्चाका लागि बाँच्ने प्रण गरेकी उनको जीवन मृत्युभन्दा अझ कहालीलाग्दो भएको छ । लामो समयदेखि न्यायका विभिन्न निकाय धाउँदा पनि उनले न्याय पाउन सकेकी छैनन् । आफ्नो पक्षबाट बहस गरिरहेका वकिलहरू नै पीडकको गोटी बनेर उसलाई छुटाउने भूमिका खेलिरहेको कटु सत्य उनले पटकपटक उजागर गरिसकेकी छन् । जसको कोही छैन र जोसँग केही छैन, उसले न्याय नपाउने निश्चितप्रायः बनिसकेको यस्ता घटनाहरूले पुष्टि गर्छन् । एउटी पीडितको यस्तो दुर्दशा देखेपछि उत्पीडनमा परेको अर्को व्यक्तिले न्यायको ढोका ढकढकाउने हिम्मत कसरी गर्ला ?
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, जसरी पनि यो सामाजिक संरचना र यसै संरचनाद्वारा निर्मित न्यायालयहरूले संवेदनहीन बनेर पीडितहरूले नै मुख थुन्नुपर्ने मनोवैज्ञानिक अवस्था उत्पन्न गरिरहेका छन् । उत्पीडित समुदायमा न्यायप्रति भरोसा टुट्दै र शक्तिशाली अपराधीहरू अपराधप्रति प्रेरित बन्दै जानुले हाम्रो न्याय प्रणाली कति विभेदकारी छ भन्ने छर्लंग हुन्छ ।
घटनाक्रमहरूले कस्तो रूप धारण गर्छन् र सम्बन्धित निकायमा कसको कति पक्षधरता देखिन्छ भन्ने कुरा मुख्यतया राज्यसत्ताको चरित्रले निर्धारण गर्छ । राज्यसत्ताको चरित्र नै विभेदकारी भएपछि उत्पीडित जात, जाति, वर्ग, समुदाय र लिङ्गहरूका निम्ति न्याय ‘आकाशको फल’ जस्तै बनिदिन्छ । न्याय छन त छ तर कहाँ छ ? सुनिन्छ, देखिन्छ तर स्वयम् अनुभूति गर्न पाइँदैन ।
हामीलाई थाहा छ, राज्यसत्ता नै पितृसत्ताको नियन्त्रणमा छ । पितृसत्तात्मक समाज जहिले पनि पुरुषप्रति उदार र महिलाप्रति हिंस्रक नै हुन्छ । यहाँको सिस्टम पुरुष शक्तिकै नियन्त्रणमा छ । शिक्षालय या न्याय प्रणाली यसैको सेवामा नतमस्तक छन् । शिक्षालयहरूबाट नवीन सोच र विद्रोह जन्मिनुको सट्टा विभेदकारी परम्परागत मूल्यमान्यताहरूको पुस्तान्तरण भइरहेको छ । शिक्षालयहरूले शक्ति र भक्तिमा नतमस्तक हुने पुस्ता निर्माण गरिरहेका छन्, झुटो इतिहास घोकाएर यही संरचनाकै पैरवी गर्ने आफूअनुकूलको पुस्ता । न्यायालय पनि यही संरचनाकै एउटा निकाय हो, जुन सत्ता संरचनाका चरित्रहरूबाट अछुतो रहने कुरै आउँदैन । सीमित र निश्चित व्यक्तिहरूको प्रभावमा परी न्यायालय परिचालन हुनु र यही सत्ता संरचनाकै रोहबरमा न्याय प्रणालीले काम गर्नु आम उत्पीडित जनसमुदायका निम्ति अत्यन्तै दुःखद र घातक विषय हो ।
यस्तो परिस्थितिमा अदालतमाथि नियमित खबरदारी गर्न र सर्भाइभरलाई होस्टाइल हुनबाट जोगाउन भूमिका खेल्दा केही सकारात्मक परिणाम हात लाग्न सक्छ । यसले आंशिक परिणाम दिने अपेक्षा त गर्न सकिन्छ तर निश्चिन्त हुने वातावरणचाहिँ पटक्कै छैन । चर्को विरोध र आन्दोलनका बावजुद आफ्नो हात पुग्ने ठाउँका मुद्दाहरूलाई सत्ताले रातारात उल्टाएका कैयौं उदाहरणका हामी आफैं प्रत्यक्षदर्शी छौं ।
अल्पकालीन समयका निम्ति न्यायालय सुधारको अभियान जति आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी यो विभेदकारी, पुलिङ्गवादी, जातिवादी र अपराधमुखी सत्ता संरचनाको परिवर्तनका लागि सघन सङ्घर्ष जरुरी छ । यो संरचनाको आमूल परिवर्तनबिना शोषित–उत्पीडित जात, जाति, वर्ग र लिङ्गहरूले पूर्ण रूपमा न्यायको अनुभूति कदापि गर्न पाउनेछैनन् । न्यायका लागि यो संरचनाविरुद्ध नै सशक्त विद्रोहको आवश्यकता छ ।
अँध्यारोमा दियो त बाल्नुपर्छ, भलै निशाचरहरू दियो निभाउने प्रयत्न बारम्बार गरिरहन्छन् । उज्यालो संसारका निम्ति ती निशाचरविरुद्ध मात्र सङ्घर्ष पर्याप्त हुँदैन, तिनलाई जन्माउने व्यवस्थाविरुद्धै कडा विद्रोह अपरिहार्य हुन्छ ।
प्रकाशित : वैशाख ९, २०७९ ०८:३३
इतिहासको एउटा बर्बर संस्कृति सतीप्रथा, जसले सदियौंसम्म स्त्रीलाई जिउँदै आगोमा पोलिरह्यो । अर्को मिथक होलिकादहन, जसले प्रत्येक वर्ष विजयोत्सवको झुटो बहानामा एउटी स्त्रीको पुत्ला जलाउँछ ।
चैत्र ३, २०७८ सुमिना
उल्लिखित अंश कवि रामाशंकर यादव ‘विद्रोही’ को ‘औरत’ शीर्षक कविताको अन्तिम अनुच्छेदबाट लिइएको हो । कविले कविताको सुरुआत यसरी गरेका छन्-
कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कूदकर जान दी थीं
ऐसा पुलिस के रिकार्ड में दर्ज है
ऐसा धर्म की किताबों में लिखा हुआ है ।
कविताका हरफहरूले पक्कै पनि इतिहासको एउटा बर्बर प्रथा सतीप्रथाप्रति इंगित गरेका छन् । कविले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्- इतिहासमा जलाइएकी ती पहिली स्त्रीजस्तै भविष्यमा जलाइने अन्तिम स्त्री को हुने हुन् ?
इतिहासमा महिलाहरूको पीडा सामान्य थिएन । बर्बरतापूर्ण सामन्ती समाजले महिलाहरूलाई जिउँदै जल्न आदेश दिन्थ्यो । थाहा छैन, पितृसत्ताको आगोमा इतिहासदेखि नै कति स्त्रीहरू निरन्तर जलाइएका छन् र अझै कति जलाइने हुन् ! मनुस्मृति भन्छ, ‘जन्मोत्सव या जन्मकर्म केवल पुत्रका निम्ति हुन्छ ।’ छोरा जन्मिँदा भव्य उत्सव मनाएर भोजभतेर गर्ने समाज छोरीलाई जन्मिनसम्म रोक लगाई पाठेघरभित्रै मार्ने प्रपञ्च रच्छ । थाहा छैन, कति छोरीहरू लिंग पहिचान गरी जन्मिन नपाई गर्भमै मारिए ! जो कठिनतापूर्वक जन्मिए, उनीहरूको जीवन पनि विभिन्न अत्याचारी सामाजिक नियम र कानुनहरूको परिधिमा बाँधिएर जन्मिनुभन्दा पनि अझै कठिन परिस्थितितर्फ धकेलियो । इतिहासदेखि नै यो समाजले निरन्तर आमा, छोरी र बुहारीहरूको बलि चढाइरह्यो । कतै महान् त कतै नीच र कतै सती त कतै होलिका बनाएर ।
इतिहासमा एउटा बर्बर प्रथा थियो, सतीप्रथा । त्यसको सुरुआत कसरी भयो, को र कस्ता महिलाहरू स्वयम् जले वा जलाइए भन्नेमा विभिन्न मतमतान्तर भए पनि यसलाई निरन्तरता दिन भने सामन्ती धार्मिक पितृसत्ता नै अघि सरेको देखिन्छ । धर्मका नाममा जिउँदै स्त्रीहरूलाई जल्न बाध्य पारेर आत्मत्यागको महिमा गाउँदै महान् करार गरी भनियो- ती स्त्रीहरू बहादुर हुन्, जसले बहादुरीका साथ चितामा प्रविष्ट भएर पतिव्रता धर्म पूरा गरी विधवा जीवनलीला समाप्त पारे । निजी सम्पत्तिको अवधारणा सुरु भएसँगै, एकनिष्ठ विवाह र पितृसत्ताको उदयसँगै पुरुषसत्ताको वर्चस्वको अघिल्तिर महिला अस्तित्वलाई पुरुषमा विलय गराउने धार्मिक पितृसत्ताको कठोर प्रपञ्च थियो सतीप्रथा, जसले एकनिष्ठ विवाहका नाममा महिलाको यौनिकतामाथि नियन्त्रण गर्ने कठोर सांस्कृतिक षड्यन्त्र रच्यो, जसले एउटा पुरुष ‘पति’ को मृत्युपछि विधवा बनाइएका महिलाको अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध रहन सक्ने सम्भावनालाई सधैंका निम्ति ‘बन्ध्याकरण’ गर्दै पतिव्रता धर्मका नाममा पतिको चितासँगै मृत्युवरण गर्नुपर्ने हिंसात्मक संस्कृतिको बीजारोपण गर्‍यो । पुरुष छ र स्त्री छे अर्थात् स्त्री आफैंमा केही हैन । पुरुष बाँचेको छ र स्त्री बाँचेकी छ । स्त्रीलाई एक्लै बाँच्ने छुट छैन । जुन दिन पुरुष मर्छ, त्यही दिन त्यही पुरुषसँगै स्त्री सती जान्छे । अर्थात्, पत्नीको जीवन पतिको जीवनमा निर्भर गराइयो । थाहा छैन, धर्मको डर देखाएर कति स्त्रीहरूलाई इतिहासको आगोमा जिउँदै पोलियो र सती बनाइयो ! जिउँदै स्त्री मार्ने बर्बर हत्यालाई स्वैच्छिक देहत्यागको तक्मा भिराइयो ।
नारीवादी लेखिका मेरी डेलीले सती शब्दसँग जोडिएको भक्तिभाव र त्यागप्रति असहमति जनाउँदै त्यस्तो खाले महानताको खण्डन गरेकी छन् । विधवाहरू राजीखुसीले सती गएका होइनन् भन्ने उनको तर्क छ । उनले मानव दबाबबाट विधवा स्त्रीहरूलाई चितामा चढाउन नसकिए लागूऔषध खुवाएर आगोमा धकेल्ने र बाँसले थिचेर त्यहाँबाट उम्किन नदिने चलनबारे उल्लेख गरेकी छन् । विभिन्न कथा, कहानी तथा सिनेमाहरूमा सती उम्किएको दृश्य देखाए पनि त्यस्तो कठोर निगरानीबाट सायदै कोही उम्किन सके होलान् र उम्किएकै भए पनि त्यस्तो खाले समाजमा तिनले भोग्नुपरेको सामाजिक र सांस्कृतिक हिंसा कस्तो रह्यो होला, हामी सहजै आकलन गर्न सक्छौं । सांस्कृतिक आधिपत्य कति खतरा हुन्छ भन्ने बुझ्न नारीलाई पतिको शवसँगै जिउँदै पोल्ने अत्यन्तै क्रूर प्रथाको निरन्तरतालाई रोक लगाउनसमेत राज्यस्तरबाट गर्नुपरेको बलप्रयोगले स्पष्ट पार्छ । अन्ततः त्रिभुवन शाहको राज्यकालमा चन्द्र शमशेरद्वारा १९७७ असार २४ देखि लागू हुने गरी कानुनी रूपमै सतीप्रथा बन्द गरियो । यो अमानवीय प्रथा रोकिए पनि पितृसत्तात्मक समाजमा स्त्री उत्पीडनलाई प्रोत्साहन गर्ने अनेकौं सांस्कृतिक हिंसाजन्य पर्वहरू आस्था र परम्पराका नाममा आज पनि जीवितै छन् ।
होलीको ऐतिहासिक मिथक
हिन्दु समाजमा प्रचलित मान्यता अनुसार ‘असत्यमाथि सत्यको विजय’ अर्थात् देवताहरूको पराक्रमका अगाडि असुर प्रवृत्तिको विनाशको इतिहास भनेर होलीको वर्णन गर्ने गरिन्छ । होली पर्व (फागु पूर्णिमा) विशेष गरी नेपाली तथा भारतीय हिन्दुहरूले प्रत्येक वर्षको फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाउने प्रमुख चाड हो । हिन्दु संस्कृति अनुसार यसको इतिहास त्रेता युगसँग जोडिएको छ । त्रेता युगमा भगवान् विष्णुका परम भक्त प्रह्लादसँग यस चाडलाई जोडेर हेरिन्छ । कथित असुर कुलका भनिने हिरण्यकशिपुले ईश्वरभक्त पुत्र प्रह्लादलाई जलाउन सृष्टिकर्ता भनिने ब्रह्माबाट आगोमा नजल्ने वरदान पाएकी आफ्नै बहिनी (प्रह्लादकी फुपू) होलिकालाई प्रह्लादलाई काखमा लिएर आगोमा बस्न आदेश दिए । प्रह्लादलाई भस्म पार्न होलिका आगोमा बस्दा आफू स्वयम् जलेर भस्म भएकी तर विष्णुभक्त प्रह्लादलाई भने केही नभएको मिथकका आधारमा त्यही दिनको सम्झनामा होली पर्व मनाउन सुरु गरिएको मानिन्छ । यो चाडले वसन्त ऋतु आगमनको संकेत पनि गर्छ । विभिन्न रङ खेलेर मनाइने होली रङहरूको पर्व भनेर पनि चिनिन्छ ।
होलीको मिथकले अरूको कुभलो चिताउनेहरू आफैं जलेर नष्ट हुन्छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरे पनि होलीसँगै जोडिएको अर्को पाटो होलिकादहनले भने केही प्रश्न उठाउँछ । होली विजयोत्सव हो कि विभेदोत्सव ? सत्य र असत्य सापेक्षिक हुन्छ कि हुँदैन ? यदि हुन्छ भने होलीको ऐतिहासिकताले सत्य र असत्यमाथि, धर्म र पापमाथि, विजय र पराजयमाथिका स्थापित भाष्यहरूमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ । यसले देवता र दानवलाई धर्म र पाप, सत्य र असत्य, उत्कृष्ट र निकृष्टको कसीमा बाँधेका मान्यताहरूको विवरण माग गर्छ । को किन र केका आधारमा देवता बनाइएका थिए र को केका आधारमा असुर बनाइएका थिए ? देवताहरू किन महान् र असुरहरू किन नीच ? देवभक्त हुनु अर्थात् आस्तिक हुनु कसरी धर्म र देवताको पूजा नगर्ने नास्तिक हुनु कसरी पाप ? देवभक्त भएकै कारण प्रह्लादलाई नजलाउने आगोले आगोबाट नजल्ने वरदान पाएकी होलिकालाई किन जलाउँछ ? हामी लिखित मिथकका आधारमा होलिकालाई त जलाउँछौं, तर पितृसत्तात्मक समाजको पारिवारिक जाँतोमा पिसिएकी एक विवश नारीको निरीहता बुझ्न खोज्दैनौं । जहाँ स्त्रीको सृजन नै पिता, पुत्र र पतिको आदेश शिरोपर गर्नका निम्ति भएको हो भनिन्छ, त्यहाँ स्त्रीहरूका अगाडि पिता, पति र दाजुहरूको आदेश अस्वीकार गर्ने सुविधा हुन्छ कि हुँदैन ? त्रेता युगमा स्त्री विद्रोह वर्जित थियो कि थिएन ? थिएन भने राजघरानामै पनि रामकी पत्नी सीताले आफ्नो पवित्रताको प्रमाण दिन किन चुपचाप अग्निपरीक्षाबाट गुज्रिनुपरेको थियो ? किन गर्भवती अवस्थामा कठिन वनवास भोग्नुपरेको थियो ? किन सीताले आफूमाथि भएको अन्याय चुपचाप ग्रहण गरिरहिन् ? किन विद्रोह गर्न सकिनन् ? पितृसत्तात्मक समाजमा नारी विद्रोह वर्जित हुनुका यस्ता असंख्य दृष्टान्त छन् ।
नारीवादी लेखिका सिमोनले लेखेकी छन्, ‘साहित्य, संस्कृति, इतिहास तथा परम्परा पुरुषद्वारा लेखिएका हुन् र पुरुषद्वारा निर्मित विधानमा महिलालाई सधैं दोस्रो दर्जामा राखियो ।’ पितृसत्ताद्वारा रचित धर्मशास्त्रका स्त्री पात्रहरू कोचाहिँ तत्कालीन पुरुष प्रभुत्वको जाँतोमा कुल्चिइएका छैनन् होला ? अन्याय र अत्याचारमा पिल्सिएका स्त्रीहरूको फेहरिस्त निकै लामो बन्छ । सती, पार्वती, वृन्दा, गोमादेखि माधवी, द्रौपदी र सीतासम्म आइपुग्दा कुनचाहिँ स्त्री पात्रले पितृसत्ताको प्रकोपबाट आफूलाई सकुशल उम्काउन सकेका छन् र ? धर्मशास्त्र होस् या वैदिक साहित्य, ती पितृसत्तात्मक व्यवस्थाद्वारा लिखित दस्तावेज हुन् । जहाँ स्त्री पात्रको निर्माण, प्रयोग र वर्णन पितृसत्ताको विकासको निरन्तरताकै उद्देश्यका निम्ति गरिएको छ । कतै पुरुष पात्रकै छाया बनाएर पुरुषकै वरिपरि नचाइएको छ भने कतै थेग्नै नसक्ने अन्यायको चाङमा राखेर सहनशील र महानताको पगरी गुथाइएको छ अनि कतै इतिहासले घृणा ओकल्ने गरी तुच्छ करार गरिएको छ । तिनै स्त्रीद्वेषी शास्त्रलाई समाज चलाउने विधानका रूपमा प्रयोग गरेर कालान्तरसम्म महिलाहरूलाई नियमकानुन र परिधिको लगाममा बाँधेर सांस्कृतिक प्रभुत्वद्वारा भाग्यवाद र नियतिवादको दलदलमा फसाई पितृसत्ता अनुकूल हुने गरी निर्माण र विकास गरिएको छ । त्यसै गरी होलीको मिथकले अन्याय गरेकी कथित असुर घोषित एक स्त्री पात्र हुन् होलिका, जो अहंकारी दाजु र कथित पराक्रमी देवताहरूको युद्धको रापमा पिल्सिन बाध्य भई पितृसत्ताको आगोमा जलेर नष्ट भइन् । न्याय र अन्याय, सत्य र असत्य, धर्म र पाप, विजय र पराजयको भाष्य स्थापित गर्न धर्मको अग्निमा उनको बलि चढाएर नयाँ कथा रच्दै एउटा सन्देश प्रवाह गरियो- यसरी हुन्छ, ‘असत्यमाथि सत्यको विजय’ ।
पितृसत्ताको अग्निमा बलि चढाइएकी होलिका
आज पनि हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक छ । मनुले भनेजस्तै, बाल्यकालमा छोरीहरू पिता र दाजुहरूको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ, बिहेपछि पति अनि वृद्धावस्थामा छोराहरूको संरक्षकत्व र नियन्त्रणमा बस्नुपर्छ । यो मान्यतालाई शिरोधार्य गर्ने समाजमा युगौंसम्म महिलाहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित राखेर घरभित्रै थुन्ने सामाजिक कानुन बनाइयो । आज त महिलाहरू स्वतन्त्रतातर्फ बल्ल बामे सर्दै छन् भने प्राचीन समयका महिलाहरूको अवस्था कस्तो थियो होला ? त्रेता युगका महिला कस्ता थिए होलान् ? उनीहरूको निजत्व र स्वतन्त्रता केकति परिबन्धित थियो ? त्यही परिस्थितिमा चेपिएकी होलिकाको अवस्थिति कस्तो रह्यो होला ? को थिइन् होलिका, आज्ञाकारी बहिनी या एक असुर जातकी स्त्री ? के चुकाउनुपर्‍यो उनलाई प्राण त्यागेर, आज्ञाकारी बहिनी हुनुको मूल्य या असुर कुलमा जन्म लिनुको पीडा ? एउटै अग्निमा बसेको छोरा प्रह्लादचाहिँ जीवितै छ (देवभक्त भएकै कारण) । किन चढाइयो इतिहासको आगोमा एउटी बहिनीको बलि ? प्रत्येक वर्षको होलीमा तिनै एउटी असुरकी बहिनी, सदियौंअघि धर्मको अग्निमा बलि चढाइएकी होलिकालाई निर्ममतापूर्वक दहन गरेर खुब उत्साहित हुँदै भनिन्छ- ‘विजयोत्सव’ ।
होलीलाई सांस्कृतिक पर्वका रूपमा मनाउनु एउटा पाटो होला तर हाम्रा परम्परागत पर्वहरूले सांस्कृतिक हिंसा र विभेदलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् भने तिनको शल्यक्रिया र पुनर्व्याख्या अनिवार्य हुनुपर्छ । संस्कृति समयसँगै परिमार्जन र रूपान्तरण हुने विषय हो । धर्म, संस्कृति र परम्पराका यस्ता अध्यायहरूबाट कहिले फाल्ने सांस्कृतिक हिंसा र विभेदका पाटाहरूलाई ? तीज, स्वस्थानी, ऋषि पञ्चमी आदिजस्ता महिलामाथि सांस्कृतिक हिंसा गर्ने पर्वहरूलाई कहिलेसम्म संरक्षण गरिरहने ?
इतिहासको एउटा बर्बर संस्कृति सतीप्रथा, जसले सदियौंसम्म स्त्रीलाई जिउँदै आगोमा पोलिरह्यो । अर्को मिथक होलिकादहन, जसले प्रत्येक वर्ष विजयोत्सवको झुटो बहानामा एउटी स्त्रीको पुत्ला जलाउँछ । जिउँदै स्त्री जलाउने सतीप्रथा होस् या निर्जीव पुत्ला जलाउने होलिकादहन, यो स्पष्ट छ, दुवै स्त्रीविरोधी प्रथा हुन् । कतै देवी बनाएर त कतै दानव बनाएर, कतै महान् त कतै नीच बनाएर ।
सदियौंदेखि स्त्रीलाई जिउँदै पोल्ने प्रथाको सांकेतिक निरन्तरता हो, होलिकादहन । कहिलेसम्म यस्ता स्त्री पोल्ने प्रथाहरूले सांस्कृतिक निरन्तरता पाइरहने ? कहिलेसम्म स्त्रीहरूको देवत्वकरण र दानवीकरण गरिरहने ? कहिलेसम्म आस्थाका नाममा होलिकादहन गरी स्त्री पोल्ने प्रथालाई निरन्तरता दिइरहने ?
प्रकाशित : चैत्र ३, २०७८ ०८:०४